के साम्राज्ञीले ‘चपली हाइट ३’ को नाम परिवर्तन गर्न भनेकी थिइन् ? « Mazzako Online
के साम्राज्ञीले ‘चपली हाइट ३’ को नाम परिवर्तन गर्न भनेकी थिइन् ?
फिल्म ‘चपली हाइट ३’ को छायांकन सुरु हुँदैछ । यो फिल्मका लागि अभिनेत्रीमा स्वस्तिमा खड्का फाइनल छिन् । तर, फिल्मका लागि अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई पनि अफर गरिएको थियो । साम्राज्ञीले आफ्नो भूमिका समेत मन पराएकी थिइन् ।
साम्राज्ञीले भूमिका मन पराएपनि काम गर्न राजी नभएको चर्चा छ । कारण, उनले फिल्मको नाम नै परिवर्तन गर्न निर्माता अर्जुन कुमारलाई भनेकी थिइन् । चपली हाइटले एडल्ट कथा बोल्छ । यसैले, यो नाममा फिल्म गर्दा आफ्नो छवि अर्कै हुने साम्राज्ञीको वुझाई थियो ।
यसैले पनि उनले फिल्मको नाम परिवर्तन गर्न भनेकी थिइन् । तर, साम्राज्ञीको प्रस्ताव निर्माता अर्जुन कुमारले अस्विकार गरेका थिए । सोही कारणले फिल्ममा स्वस्तिमाको इन्ट्री भयो भन यता साम्राज्ञीले खेल्न मानिनन् ।